Discount Polyurethane spray foam machine Manamboatra sy Factory | XiongYe
Masinina sifotra polyurethane
Polyurethane foaming material dia manana tombony maro toy ny induction, heating proofing, sound proofing ary anticorrative sns. Be mpampiasa amin'ny faritra maro. Sariaka sy fitsitsiana angovo ny tontolo iainana. Ny fiasa sy ny hafanana miaro amin'ny hafanana dia tsara kokoa noho ny fitaovana hafa.
Tombony azo ampiasaina amin'ny milina pu:
1. Fitaovana fanodinana pneumatika dia manana ny mampiavaka azy ny habeny kely, ny lanjany maivana, ny tahan'ny tsy fahombiazana ambany, ny fandidiana tsotra ary ny fihetsiketsehana mety;
2. Ny fivoaran'ny rivotra avo lenta dia mahatonga ny fitaovana hiasa mafy;
3. Ny fitaovana fanivanana fitaovana marobe dia afaka mampihena ny fanakanana;
4. Ny rafitra fiarovana multi-leakage dia afaka miaro ny fiarovana ireo mpandraharaha;
5. Ampiasaina amin'ny rafitra famadihana vonjy maika, izay afaka mamaly haingana ny hamehana;
6. Ny rafitra fanafanana dia afaka manafana ny akora ho amin'ny fanjakana mety hihaona amin'ny fananganana ara-dalàna ny fitaovana;
7, ny tontonana fiasan'ny fitaovana dia toe-java-misy mahaolona, ​​mora ny mahafehy ny fomba fiasa;
8. Ny basy fitifirana vaovao dia misy tombony amin'ny habeny kely, lanja maivana ary tahan'ny tsy fahombiazana ambany;
9. Ny paompy fihinanan-tsakafo dia mampiasa fomba fampitahana miovaova lehibe, izay afaka mamahana fitaovana mora foana koa rehefa avo ny viscosity an'ireo akora amin'ny ririnina;
Loharanon-kery: dingana tokana 220V 50HZ (azo namboarina)
Herin'ny fanafanana: 7.5kw
Fomba entina mitondra fiara: pneumatika
Loharanon-drivotra: 0.5-0.8MP≥0.9m3 / minitra
Vokatra mivoaka: 2-12 kg / min
Fanerena faran'izay avo indrindra: 11Mpa
Tahan'ny famokarana fitaovana AB: 1: 1
Fitaovana mahazatra momba ny fitaovana:
Masinina lehibe: 1 napetraka
Basy famafazana: 1 set
Paompy manainga: 2 set
Mpampifandray barika: 2 set
Fantsom-panafanana: 15meters (60metatra lava indrindra)
Mpifandray basy: 2 metatra
Boaty fanampin-javatra: 1 napetraka
Boky fampianarana: kopia 1
Ampiasaina indrindra amin'ny fandrotsahana fananganana, famafazana fananganana, fonosana buffer.
Ho an'ny famafazana: fanamafisana ny rindrina ivelany sy anaty rindrina, fitifirana mangatsiaka fitehirizana, fantsom-baravarankely ary fitabataban'ny fiara sy fiara fitateram-bahoaka, fanamafisana ny tafo sy tantera-drano, kamio vita amin'ny vata fampangatsiahana ary fanefitra fanafody famonoana otrikaretina.
Ho an'ny fandrotsahana: heater ny rano amin'ny masoandro, vata fampangatsiahana, vata fampangatsiahana, fantsona fantsom-baravarana, padding varavarana, vokatra firakotra sy fonosana, varavarana mihidy, varavarana fiarovana, fanamboaran-dàlana, rindrina ary rindrina modely sns.
Previous: eps foam vakana
Manaraka: Masinina firakotra
PSF I manoratra feno mandeha ho azy mialoha Pre-exp ...
Masinina tontonana mihetsika mandeha ho azy feno
Masinina mamorona karazana semi-mandeha ho azy
Masinina fanapahana mandeha ho azy feno
Masinina fanoratana sombin-tarehimarika fanaraha-maso